All Mobile နည်းပညာများ
Android Phone In ZawGyi Fonts
FileFlash China Mobile
IPhone ZawGyi Font
Printer Drivers and Resetters
ZawGyi Fonts ထည့်နည်း
Image Zoom Effect ထည့်နည်း
How To Make Your Blogger Post Ready For Mobile Phones
FileFlash - Download
Note-N7000TH-12 Mar 4.0.4
Note-N7000TH-12 Mar 2.3.6
Kingdoms Lords v1.0 for iPhone/Pad/Pod touch
မြို့တွေခံတပ်တွေဆောက် ၊ စစ်တပ်ကြီးထူထောင်ပြီး ရန်သူတွေကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်းရတဲ့ ဂိမ်းလေးပါ။ ဒီဂိမ်းလေးဟာထွက်ရှိပြီးမကြာခင်မှာပဲ download လုပ်မှုအများဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Gameloft ကနေရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ချင်သူများအောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။ Kingdoms Lords v1.0 for iPhone/Pad/Pod touch အားရယူရန် .
Sony Experia Root လုပ်နည်း
အခုဆိုရင် Sony Experia devices အတွက် အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ Root toolkit နဲ့ Root လုပ်ဖို့အရမ်းလွယ်ကူသွားပါပြီ။ အခု Root toolkit ကို xda member doomlord နှင့် Revolutinary Team အဖွဲ့က ဖန်တီးပေးထားတာပါ။ xperia devices တွေအတွက် အရမ်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းလေးပါ။ xperia phones တွေထဲက lockded boot loaders နဲ့ unlocked boot loaders အတွက်လဲ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Super OneClikc Root Tool ထက်အသုံးပြုရတာ ပိုလွယ်ပါတယ်။.
* GalaxyS3Root.zip File ကို Computerရဲ့တစ်နေရာရာမှာဖြန့်ထားပါ။ File ၃ ဖိုင်ရလာပါလိမ့်မယ်။ ကဲ စပြီး Root လုပ်ကြရအောင်။ ။ Step 1 : Volume Down, Home Center, Power Buttons များကိုတပြိုင်နက် စက္ကန့် ၂၀ လောက်နှိပ်ထားပါ။ ထိုအခါသင့်ကို Download Mode ထဲသို့ ဝင်မလား မဝင်ဘူးလား မေးပါလိမ့်မယ်။ Step2: Volume Up Key နှိပ်ပြီး Download Mode ထဲသို့ဝင်ပါ။ Step3: Download Mode ထဲရောက်တာနဲ့ S3 ကို Computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။ Step4: အပေါ်ဆုံးမှာ Download လုပ်ထားတဲ့ Driver ကို Install လုပ်ပြီးတာမှန်ပါက Device Manager ထဲက Universal Serial Bus controllers dropdown menu တွင် SAMSUNG Mobile USB CDC Composite Device ဆိုတာဝင်နေပါလိမ့်မယ်။
Nokia Lumia 800 ကို စမ်းပြီး သုံးကြည့်တော့ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရပေမယ့် ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပြန်ဘူး။ Nokia Lumia 800 က Windows Phone 7.5 Mango ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Hardware quality က တော့ ကောင်းတယ်လို့ ဆိုရပေမယ့် camera quality ကတော့ iPhone 4s လောက် မကောင်းပါဘူး။ကောင်းတဲ့ အချက်နဲ့ မကောင်းတဲ့ အချက်ကို ယှဉ်ကြည့်ရင်တော့- c# , silverlight developer တွေ လွယ်လွယ်ကူကူ App ရေးလို့ရတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ App တွေ များလာနိုင်ခြေရှိတယ်။
How To Root LG Otimus One P500
Root လုပ်နည်းမျိုးစုံထဲမှ LG Otimus One P500 ကို Root လုပ်နည်းလေးကို တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ခရစ်စမတ်နေ့ လေးမှာ ပို့စ်တခုအနေနဲ့ Myanmar Mobile Application Store မှ User များအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ LG Otimus One P500 ဖုန်းတွက်တော့ အခုပြမဲ့နည်းလမ်းလေးက ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ရတာလွယ်ပါတယ်။ ပထမအဆင့် : Rootလုပ်မဲ့ ဖုန်းမှာအရေးကြီးတဲ Files, SMS, apps, contacts internet နဲ့ MMS setting တွေကို Data Backup လုပ်ထားပေးပါ.
4:16 AM Samsung Firmware 1 comment
1:12 AM Activator No comments
I-Mobile I-Style Q5 Root
6:33 PM I-MOBILE3comments
i-mobile-istyle q5 ကို
လိုချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် Download
6:08 AM Android Phone In ZawGyi Fonts No comments
i-mobile i-note WiFi Tablet ROOT
11:44 PM I-MOBILE 1 comment
i-mobile i-note WiFi Tablet ကို Root လုပ်ရန်
CAR2PC GAME
1:36 AM PC GAMES No comments
PC Game Download လိုက်ပါ ကားဂိမ်းလေးဆိုတော့ လူငယ်ကြိုက်လေးဖြစ်မှာပါ Crack ပါပါတယ်
TWZ- TM2File Flash
i style3root လုပ်နည်း
2:42 AM I-MOBILE2comments
i style3root လုပ်နည်း ကိုကျွန်တော်အပြည့်စုံမတင်ပေးတာဟာ
တော့ ကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ပေးလိ်ုက်ပါမယ် ဒီအတိုင်လေးလိုက်
2- Setting > Developer > USB Debugging
3- USB နဲ့ Phone ဆက်သွယ်လိုက်ပါ
4- Hardware ကိုတွေ့အောင်ရှာပါ
5- PID ကိုကြည့်ပါကိုယ့် Phone ကဘာ Code ဆိုတာ တွေ့ပြီဆိုရင်ရွေးလိုက်ပါ
7- ADB Interface တွေ့ပြီဆိုရင်အိုကေနေပြီ
8- recovery mode ဝင်ပါ Factory Mode
9- ဝင်ပြီးရင် PID ပြန်ရှာ ကြည့်ပါ ADB အလုပ်လာလို့ လုပ်ရင်အိုကေပြီ
10- ပြီးရင် 3-Root.bat ဖွင့်ပါ ( Factory Mode မှာလုပ်ရမှာပါ )
11- [color=#FF0000]Rebooting (1/3) - Continue...[/color] လို့ပေါ်လာရင်ဖုန်းRestart လုပ်လိမ့်မယ်
12- [color=#FF0000]Rebooting (2/3) - Continue...[/color]
13- [color=#FF0000]uid=0 (root) [/color] Enter
14- ခဏနေရင် [color=#FF0000]Rebooting (3/3) - You should now be Rooted[/color] စာတန်းပေါ်လာရင်
တော့ကခုန်လို့ရပါပြီ Error တက်ရင်တော့သေသေချာချာပြန်လုပ်ကြည့်ပါအဆင်ပြေပါစေ
9:00 PM Anti Virus No comments
+Mediafire Download | + iFiles Download
ESET NOD 32 DOWNLOAD
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပြက္ခဒိန် ကြည့်ရန်
+ZawGyi KeyBoard | + ZawGyi Fonts - + Myanmar3Keyboard | Myanmar3 Fonts
Copyright © 2011 မျိုးညီမင်း | Powered by Blogger.
Design by မျိုးညီမင်း | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Templates | Web Hosting Coupons